एकलिएका आकाश, पूजालाई पनि सकस | Rajatpatonline Nepal's No. 1 Films News Portal
फिल्म ‘म त तिम्रै हुँ’ र ‘तिमी सँग’मा काम गर्दासम्म नायक आकाश श्रेष्ठ न दर्शकमाझ चिनिन सकेका थिए न त फिल्मबाट उनलाई अफरको ओइरो लाग्ने गरेको थियो । तर, सुदर्शन थापाले निर्देशन गरेको फिल्म रामकहानीमा काम गरेपछि भने आकाशको भाग्य चम्कियो । फिल्मले शहरका भित्तामा टाँस्नका लागि बनाइएको पोस्टरको पैसा नउठाए पनि आकाशको जोडी अभिनेत्री पूजा शर्मासँग सर्वाधिक रुचाइयो । अभिनयको तारिफ भने खोइ के खोइ । जस्ताको त्यस्तै । तर, गहुँ गोरो अनुहारले युवतीहरु उनका फ्यान भए । आकाशले पूजा शर्मासँग बिहे नै गर्नुपर्छ भन्ने खालको आवाज पनि उनीहरुका फ्यानहरुमा उठे । दर्शकहरुले नै मन पराएपछि आकाशले पनि करिअर जोगाउने लोभले पूजाको साथ छाडेनन् । पूजासँग भकाभक फिल्मसँगै म्यूजिक भिडियोमा पनि काम गरे ।
एकसाथ फिल्म र म्यूजिक भिडियोमा काम गर्न थालेपछि मिडिया र फिल्म बजारमा कलाकारको प्रेम चर्चा चल्ने गरेको छ । आकाश र पूजा पनि चुर्लुम्मै प्रेममा डुबेको चर्चाले फिल्म क्षेत्र खुबै तात्यो । फोकटमा बजारमा चर्चा भइरहेको देख्दा आकाश र पूजा पनि कम्ता दंग थिएनन् । मिडियाको अगाडि प्रेम नकारे पनि भित्री रुपमा भने उनीहरु विवाहकै नजिक पुगेको चर्चाहरु पनि खुबै चले । तर, फिल्म क्षेत्रमा कलाकारको कतिखेर आन्द्रा जोडिन्छ अनि कतिखेर पानी बाराबार हुन्छ पत्तै हुँदैन । आकाश र पूजाको सम्बन्ध पनि अहिले निभ्न लागेको बत्ति जस्तै भएको छ । भेट्दा हाई हेल्लोबाहेक दोहोरो कुराकानी समेत हुँदैन रे । बजारमा यस्तै चर्चा छ । अहिले उनीहरु एकअर्काको नाम समेत सुन्न चाहँदैनन् भन्ने चर्चा पनि बजारमा गाइँगुइँ सुन्न पाइन्छ ।
मन मिल्दासम्म आकाश र पूजाले एकसाथ के के गरेनन् होला ! त्यसको बेलिविस्तार लगाउने हो भने एउटा गतिलै किताब बन्छ । आकाश र पूजाको जन्मदिन समेत फ्यानहरुले नै मनाइदिन्थे । फ्यानहरुले आकाश र पूजा दुवैलाई जन्मदिनमा लाखौं पर्ने सुनका डल्ला त कति दिए कति । त्यो उपहारपूजा र आकाशकै खर्चले किनिएको थियो वा फ्यानले नै माया गरेर किनेका थिए ? त्यो त राम जाने । तर, फ्यानहरुले जन्मदिन सेलिब्रेन गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूजा र आकाश बेहुला र बेहुलीझैँ सिंगारिएर एकसाथ पुग्ने गरेका थिए । कार्यक्रममा उनीहरुले सुनको औंठी साटासाट गरेको दृश्यहरु पनि देखियो । जसले उनीहरुको इन्गेजमेन्ट भएको चर्चा पनि चल्यो । तर, अहिले हेर्नुस् त, पूजा र आकाशको मित्रता एकादेशको कथाझैँ भएको छ ।
पूजासँग सम्बन्ध चिसिएपछि अहिले आकाश डुकुलन्ड्याङ भएका छन् । अर्थात् एक्लो भएका छन् । पूजा पनि एक्लिएकी छन् । अचेल दुबैले म्यूजिक भिडियो एकअर्का विनै गरिरहेका छन् भने फिल्ममा पनि अब आकाशको जोडी अरु नै हिरोइनसँग बाँधिन थालेको छ । पूजाको कथा पनि त्यस्तै हो । एक्लै एक्लै हुँदा दुबैलाई म्युजिक भिडियोमा भ्युज तान्न कम्ता हम्मे हम्मे परेको छैन । त्यति मात्र कहाँ हो र ? केही वर्षयता पूजालाई साक्षी राखेर फ्यानहरुसँग जन्मदिन मनाउने गरेका आकाशले यसपाली एक्लै उपस्थित भएर फ्यानहरुसँग जन्मदिन मनाए । सर्सरती हेर्दा पूजा र आकाशको जोडि नजोडिने गरि छुट्टिएको छ ।
Previous articleमहानायकले गाएको गीतमा उनकै स्वर छुट्याउन हम्मे हम्मे
Next articleयुरोप देखि अमेरिकासम्मको म्युजिकल टुरमा मेलिना देखि दीपकसम्म